Vintage na lany andro? Jereo raha eto amin'ity lisitra ity ny vokatra Apple anao. Vaovao IPhone
Na eo aza ny zava-misy fa tena lamaody ny "vintage" na "Retro", ao anatin'ny haitao dia tsy zavatra malaza be izany. Eny, marina fa maro no handoa vola be amin'ny iPhone am-boalohany izay tsara toetra, na ho an'ny iray amin'ireo iMac G3 sarobidy, fa natokana ho an'ireo tia an'io karazana sombin-javatra maniry azy ireo io ho haingon-trano. singa. Ny ankabeazanay dia mankafy ny vokatra havaozina ary manohy mitazona ny fanampiana tohanan'ny Apple. Mampalahelo fa tsy izany no hatao mandrakizay, ary Apple dia manana ny lisitry ny fitaovana "Vintage sy obsolete" ho an'ireo izay tsy manome karazana fanampiana intsony.
1 Vintage sy obsolete
2 Modely farany nanambara fa lany andro na antitra
3 Modely manaraka hiditra ity lisitra ity
Vintage sy obsolete
Inona avy ireo fahasamihafana misy eo amin'ny fiotazam-boaloboka sy ny lany andro? Farafaharatsiny farafaharatsiny ho an'i Apple, Vintage dia ireo fitaovana izay eo anelanelan'ny 5 sy 7 taona rehefa nitsahatra ny famokarana. Ny maodely vitsivitsy dia mitazona ny fanohanana any Torkia sy Kalifornia, noho ny lalàna any amin'ireny toerana ireny, fa tsy any amin'ny firenena sisa. Na izany aza, ireo maodely efa nandalo 7 taona mahery taorian'ny nijanonany tamin'ny famokarana dia efa heverina ho efa lany andro, ary tsy tohanana intsony amin'ny firenena rehetra manerantany. Raha manana fahasimbana ianao dia tsy manamboatra na manome ampahany intsony ny Apple.
Modely farany nanambara fa lany andro na antitra
Inona avy ireo maodely farany izay manana ny voninahitra hiditra amin'ny sokajy antitra na lany andro? Raha ho an'ny kahie, ny MacBook fotsy hatramin'ny tapaky ny taona 2009, ny MacBook Air tamin'ny faran'ny taona 2008, ny 13-inch ary 15-inch MacBook Pro tamin'ny tapaky ny taona 2009, ary ny 17-inch tamin'ny fiandohan'ny taona 2009, ny 20-inch ary 24- inch iMac tamin'ny fiandohan'ny taona 2009 sy ny Mac Mini tamin'ny fiandohan'ny taona 2009. Tsy misy iPad amin'ity lisitra ity amin'izao fotoana izao, fa eny misy iPhone, ny maodely voalohany indrindra. Te hahita ny lisitra feno ve ianao? Azonao ilay izy ao amin'ny tranonkala Apple ofisialy.
Modely manaraka hiditra ity lisitra ity
Ny 17-inch MacBook Pro tapaky ny taona 2009 dia iray amin'ireo malaza indrindra izay hoheverina ho voaloboka, fa ambonin'izany rehetra izany Misongadina ny iPhone 3G sy 3GS, izay hanana io laza mampiahiahy io amin'ny 9 Jona.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Vintage na lany andro? Jereo raha eto amin'ity lisitra ity ny vokatra Apple anao
Ahoana ny fomba hanerena hanidy fampiharana amin'ny Apple Watch